ငြင်းပယ်ခံရချိန်အောင်မြင်ခြင်း | The Blue Book
လူအများစုဟာဘဝမှာတခါတစ်ရံငြင်းပယ်ခံရတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနီးဆုံးလူရင်းနှီးရတဲ့သူတွေကတခါတလေနာကျင်စရာတွေပေးတတ်ပါတယ်, ရင်နှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ ငါ့ဟာအသုံးမဝင်တဲ့လူပါလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေဖြစ်လာစေပါတယ်။သင့်အတွက်သတင်းကောင်းက ,ဘုရာသခင်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုပျောက်ကင်းစေမယ်, သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ခံပေးတယ် , ဘုရားသခင်ရဲ့ အချစ်ဟာ အခြေအနေပေါ်မမူတည်ပါဘူး။
3 ယုဒပြည်မှ ထွက်သွား၍ ဂါလိလဲပြည်သို့ တဖန် ကြွတော်မူစဉ်တွင်၊
5 ယာကုပ်သည် မိမိသားယောသပ်အား ပေးသောမြေအကွက်နှင့်အနီး၊ ရှမာရိနယ်၊ ရှုခါအမည်ရှိသော မြို့သို့ ရောက်တော်မူ၏။
6 ထိုအရပ်၌ယာကုပ်၏ ရေတွင်းရှိ၏။ ယေရှုသည် ခရီးသွား၍ ပင်ပန်းသောကြောင့် ရေတွင်းနားမှာ ထိုင်တော်မူ၏။ ထိုအချိန်သည် ခြောက်နာရီအချိန်ဖြစ်၏။
7 ရှမာရိမိန်းမတယောက်သည် ရေခပ်ခြင်းငှါ လာ၍၊ ယေရှုက၊ ငါသောက်ဘို့ရေပေးပါဟု ထိုမိန်းမအား မိန့်တော်မူ၏။
8 အကြောင်းမူကား၊ တပည့်တော်တို့သည် စားစရာကိုဝယ်ခြင်းငှါ မြို့ထဲသို့သွားကြသည် အခိုက် ဖြစ်သတည်း။
9 ထိုမိန်းမကလည်း၊ သင်သည်ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင်၊ ရှမာရိမိန်းမဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့် သောက်ဘို့တောင်းသနည်းဟုဆို၏။ ဆိုသည်အကြောင်းကား၊ ယုဒလူတို့သည် ရှမာရိလူတို့နှင့်ပေါင်းဘော်ခြင်း မရှိ။
10 ယေရှုကလည်း၊ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကို၎င်း၊ ငါသောက်ဘို့ရေပေးပါဟုဆိုသော သူကား အဘယ် သူဖြစ်သည်ကို၎င်း သင်သည်သိလျှင် ထိုသူကိုတောင်းလိမ့်မည်။ ထိုသူသည်လည်း အသက်ရေကို ပေးလိမ့်မည် ဟုပြန်၍ မိန့်တော်မူသော်၊
11 မိန်းမက၊ သခင်၌ရေခပ်စရာမရှိ ရေတွင်းလည်း နက်သည်ဖြစ်၍၊ အသက်ရေကို အဘယ်သို့ရပါ မည်နည်း။
12 ဤရေတွင်းကို ငါတို့အဘ ယာကုပ်သည် ငါတို့အား ပေး၏။ သူ့ကိုယ်တိုင်မှစ၍၊ သားသမီး၊ တိရိစ္ဆာန် များတို့သည် ဤတွင်းရေကိုသောက်ကြပြီ။ သခင်သည် ထိုသူထက်ကြီးမြတ်သလောဟုဆို၏။
13 ယေရှုကလည်း၊ ဤရေကိုသောက်သောသူသည် နောက်တဖန် ရေငတ်ဦးမည်။
14 ငါပေးသောရေကိုသောက်သောသူမူကား၊ ရေငတ်ခြင်းနှင့်အစဉ်မပြတ် ကင်းလွတ်လိမ့်မည်။ ငါပေး သော ရေသည် ထိုသူ၌ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းအလိုငှါ ထွက်သော စမ်းရေဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
15 မိန်းမကလည်း၊ သခင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရေငတ်ခြင်းနှင့်၎င်း၊ သည်ကိုလာ၍ရေခပ်ခြင်းနှင့်၎င်း ကင်းလွတ် မည်အကြောင်း ထိုရေကိုပေးပါဟု တောင်းလျှင်၊
16 ယေရှုက၊ သွားလော့။ သင်၏လင်ကိုခေါ်၍ သည်ကိုလာဦးလော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
21 ယေရှုက၊ အချင်းမိန်းမ၊ ငါ့စကားကိုယုံလော့။ ဤတောင်သို့ မလာ၊ ယေရုရှလင်မြို့သို့မသွားဘဲ ခမည်း တော်ကိုကိုးကွယ်ရမည် အချိန်ကာလရောက်ဆဲရှိ၏။
22 သင်တို့သည်ကိုယ်မသိသောအရာကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ ငါတို့သည်ကိုယ်သိသောအရာကို ကိုးကွယ်ကြ ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ယုဒလူတို့၌ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းရှိ၏။
23 ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှတို့သည် ခမည်းတော်ကို နံဝိညာဉ်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာတရားနှင့်၎င်း၊ ကိုးကွယ် ရမည့်အချိန်ကာလသည်လာ၍ ယခုပင်ရောက်လျက်ရှိ၏။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသို့ကိုးကွယ်သောသူတို့ကို ခမည်းတော်သည် အလိုရှိတော်မူ၏။
25 မိန်းမကလည်း၊ မေရှိကြွလာတော်မူသည်ဟု အကျွန်ုပ်သိပါ၏။ ရောက်တော်မူသောအခါ အကျွန်ုပ်တို့ အား အလုံးစုံတို့ကိုဘော်ပြတော်မူမည်ဟု လျှောက်ပြန်၏။ မေရှိအနက်ကား၊ ခရစ်တော်ဟု ဆိုလိုသတည်း။
26 ယေရှုကလည်း၊ သင်နှင့်စကားပြောသော ငါသည် မေရှိပင်ဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
27 ထိုအခါတပည့်တော်တို့သည် ရောက်လာ၍၊ ထိုမိန်းမနှင့်စကားပြောတော်မူသည်ကို အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏၊ သို့သော်လည်း၊ အဘယ်အလိုတော်ရှိသနည်း၊ ထိုမိန်းမနှင့်အဘယ်ကြောင့် စကားပြောတော်မူသနည်းဟု အဘယ်သူမျှမလျှောက်ကြ။
28 ထိုမိန်းမသည်လည်းရေအိုးကိုထားခဲ့၍ မြို့ထဲသို့ သွားပြီးလျှင်၊
29 အကျွန်ုပ်ပြုဘူးသမျှသော အမူအရာတို့ကို ထုတ်ဘော်သောသူကိုလာ၍ကြည့်ကြပါ။ ထိုသူသည် ခရစ်တော်မှန်လိမ့်မည်လောဟု လူများတို့အား ပြောဆိုသော်၊”
ယောဟန် ၄: ၃-၂၉ ကိုဖတ်ပြီးဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ရအောင်
အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ နေ့လည်နေပူပူကြီးမှာ တယောက်ထဲရေခပ်ဖို့ရေတွင်းဆီလာနေပါတယ်, သူမဟာ အကြိမ်များစွာလက်ထပ်ထားတာကြောင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကသူမကို အပေါင်းအသင်းမလုပ်ပဲ ပစ်ပယ်ထားခြင်းခံရတာပါ။
ယောဟန် ၄ : ၇-၉
9 ထိုမိန်းမကလည်း၊ သင်သည်ယုဒလူဖြစ်လျက်ပင်၊ ရှမာရိမိန်းမဖြစ်သောအကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့် သောက်ဘို့တောင်းသနည်းဟုဆို၏။ ဆိုသည်အကြောင်းကား၊ ယုဒလူတို့သည် ရှမာရိလူတို့နှင့်ပေါင်းဘော်ခြင်း မရှိ။ )
သခင်ယေရှုအားဖြင့် ဒီအမျိုးသမီး ဘယ်လိုအံ့ဩစရာအမှုတွေကြုံခဲ့ရလဲ?
ဟေရှာယ ၅၃: ၃ နှင့် ၁ ပေတရု ၂: ၄ ကိုဖတ်ပါ
ဟေရှာယ ၅၃: ၃(NIV)
(3) မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံ၍၊ လူတို့တွင် အယုတ်ဆုံး သော သူဖြစ်၏ ငြိုငြင်သောသူ၊ နာကြဉ်းခြင်းဝေဒနာနှင့် ကျွမ်းဝင်သော သူဖြစ်၏။ သူတပါးမျက်နှာလွှဲခြင်းကို ခံရ သော သူကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကို ခံလျက်ရှိ၍၊ ငါတို့သည် မရိုသေကြ။
၁ ပေတရု ၂: ၄
(4) လူတို့ပယ်ထား၍ ဘုရားသခင်ရွေးချယ်တော်မူသော အသက်ကျောက်မြက်တည်းဟူသော ထိုသခင် ထံသို့သင်တို့သည်ရောက်၍၊—
ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရတဲ့ ငြင်းပယ်ခံရတဲ့ခံစားချက်ကို သခင်ယေရှုနားလည်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ?
ယောဟန် ၄ထဲက အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ရင် , ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ဘဝဟာ သခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုယုံကြည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့ လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့အောက်မှာရေးထားတဲ့ကျမ်းချက်လေးတွေအတိုင်း တဆင့်စီလုပ်ဆောင်သွားရအောင်။
1. ၁။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိတဲ့လဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံရအောင် –
ဧဖက် ၁: ၄-၆
၂။ သင့်ဘဝထဲကဟာကွက်ဖြစ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဘုရားသခင်ထံကစီးဆင်းလာတဲ့ “အသက်စမ်းရေ”နဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ကြရအောင်-
ယော ၄: ၁၄-၁၅
15 မိန်းမကလည်း၊ သခင်၊ ကျွန်ုပ်သည်ရေငတ်ခြင်းနှင့်၎င်း၊ သည်ကိုလာ၍ရေခပ်ခြင်းနှင့်၎င်း ကင်းလွတ် မည်အကြောင်း ထိုရေကိုပေးပါဟု တောင်းလျှင်၊”
၃။ ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ပါ! –
ဂလာတိ ၄: ၆-၇
ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းတဲ့အခါ, ကျွန်ုပ်တို့ဘဝထဲမှာဆိုးဝါးစွာခံစားနေရတဲ့ငြင်းပယ်ခံနှလုံးသားတွေကိုရှာဖွေပြီး ဒီခံစားချက်တွေကနေ အောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ဖို့ ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းရအောင်။နောက်တခုသတိရဖို့က ဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်ကအခြေအနေပေါ်မမူတည်ဘူး , သူအမြဲချစ်နေတယ်, ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ငြင်းပယ်ခံရပြီးနာကျင်နေတဲ့အရာတွေကနေသူသက်သာခြင်းလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်။
သခင်ယေရှုဘုရား , ကျွန်ုပ်ကို ချစ်ပေးတယ် လက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့အထဲမှာခံစားနေရတဲ့ ငြင်းပယ်ခံရတဲ့နာကျင်မှုတွေကို ကိုယ်တော့်ကိုပေးပါတယ်,ကျွန်ုပ်စိတ်ကိုပြန်လည်ကျန်းမာစေပါ, ကျွန်ုပ်ကိုနာကျင်စေခဲ့တဲ့သူတွေကိုလဲခွင့်လွှတ်နိုင်ဖို့မစပါ။ကိုယ်တော့်ရဲ့သားသမီးဖြစ်စေခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖ။
ဟေဗြဲ ၁၃: ၅
“သင့်ရဲ့အသက်တာမှာ ငွေကိုတက်မက်ခြင်းမရှိပဲ သင့်မှာရှိတဲ့အရာနဲ့ တင်းတိမ်ရောင့်ရဲခြင်းရှိဖို့လိုပါတယ်၊ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ဘုရားသခင်ဟာ “ငါသည်သင့်ကိုမစွန့် , သင့်ကို ဘယ်တော့မှပစ်ပြီးမထားခဲ့ဘူး”လို့ပြောထားခဲ့တယ်။”